Igumbi elipholileyo elinebhedi ephindwe kabini kufutshane ne-Amiens kunye nesibhedlele.
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguNicole Et Xavier
Igumbi lokulala elingama-20 m2 elinebhedi ephindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela labucala.
Kumgangatho we-2nd wendlu endala yePicardy, kwikhaya labucala, imizuzu emi-5 ukusuka kwisibhedlele saseMzantsi Amiens, iZenith, iMégacité (iziko leMboniso), kunye neYunivesithi.
Isidlo sakusasa sinikezelwa kwiintsuku ezi-3 zokuqala.
Ukungena ngomnyango omkhulu wendlu, igumbi lokulala likwi-2nd floor
Igumbi lokulala eli-2 elineebhedi ezi-2 liyafumaneka kunye negumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo, ukuba usuka kusapho olunye okanye kwiqela elinye. (Jonga i-ad "Igumbi elipholileyo elineebhedi ezi-2 kufutshane ne-Amiens kunye nesibhedlele)
Umenzi wekofu, iketile kunye nemicrowave ziyafumaneka.
Indlu ibekwe kwisitrato esizolileyo, esijonge emaphandleni ajikelezileyo kunye neegadi; Imizuzu emi-5 ukusuka esibhedlele, iZenith, i-campus yaseyunivesithi yaseSalouel kunye nemizuzu eyi-10 ukusuka kwidolophu yase-Amiens.
Umbuki zindwendwe ngu- Nicole Et Xavier
Nous sommes un couple de 65 ans. Nous avons 4 enfants et 7 petits enfants. Nous avons beaucoup voyagé et aimons les rencontres avec les voyageurs. Nous pouvons donner des conseils sur les curiosités de notre région.
Wamkelekile ngobubele. Ezinye iingcebiso zokundwendwela ukuba uyafuna, ulwazi oluthile kwindawo.
UNicole Et Xavier yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Pont-de-Metz